Kheyre iyo Rooble waa in ay ka jawaabaan su’aalahaan | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Kadib markii ay cadaatay in ciidamadii loo qaaday dalka Eritrea, ay qeyb ka noqdeen dagaalkii sokeeye ee ka qarxay Itoobiya dabayaaqadii sanadkii hore, waxaa lagama maarmaan ah in ay aamusnaanta ka baxaan labada Ra’iisul Wasaare ee la soo shaqeeyay Farmaajo, midka hadda Maxamed Xuseen Rooble iyo midkii hore Xasan Xasan Kheyre.
Dadka u dhuun-duleela arrimaha sir-doonka ayaa rumeysan in Ra’iisul Wasaarihii ugu waqtiga dheeraa dalka, burburkii kadib, Xasan Cali Kheyre, uu si weyn kaga warqabay, xaaladdii qarsoodiga ahayd ee dhalinyarada maqan loogu qaaday Eritrea, sidaas daraaddeed, waxaa lama huraan ah inuu ka jawaabo su’aalaha isaga ka quseeya arrinkaan.
RW Kheyre, waxaa looga baahan yahay inuu caddeeyo shan arrimood oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah;
Trada rasmiga ah ee dhalinyarada loo qaaday Eritrea?
Cidda ka danbeysay in la qaado dhalinyarada?
U jeedka rasmiga ah ee laga lahaa daabulidda dhallaankaan?
Maxay ahayd sababta sida qarsoodiga ah loogu qoray?
Siduu ku ogolaaday ciidamo aan ka tirsaneyn afarta ciidan ee dalka?
Ra’iisul Wasaare Rooble, waxaa isna looga baahan yahay inuu caddeeyo dhowrkaan arrimood oo muhiim ah sida;
Halka ay hadda ku sugan yihiin dhalinyarada nool?
Imisa ayaa ku dhimatay dagaaladii ka dhacay Itoobiya?
Maxaa ka jira in qaarkood baxsadeen, maleeshiyaad Oromo ahna madax furasho u heystaan?
Dadkii qoray ee diray kadibna dagaalka galiyay maxaa xukuumaddiisa ka qorsho ah?
Su’aalahan iyo kuwo kale oo badan waxaa qaba waalidiinta dhalay dhaliyarada maqan, oo aaminsan in Rooble iyo Kheyre, ay yihiin labada musuul ee sida ugu fudud u soo bandhigi kara arrinkaan, waxayna ka dalbanaya in ay aamusnaanta ka baxaan qaataanna masuuliyadda ka saraan dhallaankaan Fahad iyo Farmaajo lumiyeen.